musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Basa riri kure remudzidzi muna 2022
Fungidzira hupenyu hwako hwemudzidzi uye maitiro ako ezuva nezuva:
1- kumuka kune ruzha rwearamu yako (hapasisina groggy mangwanani)
2- kutarisa chiso chakajeka uye chakazorodzwa mugirazi (kurara zvakanaka pasina kunetseka)
3- kushandisa nguva pahutsanana (tora nguva yakawanda kana shoma sezvaunoda)
4- kunakidzwa nekudya kwemangwanani kunonaka uye kune hutano (hapana chikonzero chekumhanya kubuda mumba uine dumbu risina chinhu)
5- kuenda kuchikoro nenzira inoshanda yaunogona kuwana (zuva remahara remota!)
6- kuita chiitiko chine musoro uye chine simba chekudzidza nevezera rako (hapasisina kurota kwezuva)
7- ndichiri nenguva yekuva nemhuri uye neshamwari (hangout isati yasvika kana yabva kuchikoro)
8- kuita mabasa epamba (chitoro chegirosari kana kutumira mai meseji kuti unenge wava kumba gare gare pane zvaitarisirwa)
9- kuita kuti zuva rako rose rive rakatsetseka uye risina hanya (ita zvinhu zvese zvausina kumbowana nguva)
10- Kudzidzira bvunzo iri kuuya (hapasisina musoro kubva pakati pehusiku cramming)
11- kuverenga bhuku rakanaka pakupera kwezuva (hapana zvakare kuomerwa neziso kubva pakushanda pamasikirini zuva rese)
12- kuenda kunorara nyore uye kurara zvakadzika (zvakanaka kune idzo husiku hwekusarara uchinetsekana nechikoro!)
Zvino fungidzira nyika iyo zvinhu izvi zvinogoneka.
Kune vamwe, zvingangove zvatove zvechokwadi, asi kune avo vedu vachiri kutarisana nekunetseka uye kuneta kwekuenzanisa chikoro nebasa, tinoziva kuti shanduko yechokwadi ichiri kuuya.
Nhau dzakanaka ndedzekuti tekinoroji iri kushanda nzira yayo yekuvandudza hupenyu hwedu nenzira dzisingafungidzirwe makore gumi apfuura.
Tekinoroji yavepo kugadzirisa matambudziko mazhinji anotarisana nevadzidzi, kunyanya avo vakaremara. Sezvo ma-cyber-physical system anoshanduka uye achiwedzera kuoma, anovimbisa kuchinjika kukuru uye kuchinjika munzira yatinoshanda nekurarama. Kugona kwavo kugadzirisa kana kubvisa zvinoiswa nevanhu zvinoita kuti vanhu vakaremara vakunde zvimwe zvipingamupinyi zvisingakundiki.
Nerubatsiro rwemichina, vanhu vakaremara vanokwanisa kukunda zvipingaidzo zvavo, kurarama hupenyu hwakazvimirira uye kubatsira zvakanaka munharaunda dzavanogara.
Tekinoroji inogona kuita kuti basa riri kure rigoneke muna 2022 kuvadzidzi muchizvarwa chino nekufambisa kushandira pamwe pakati pevashandi pamwe chete kunyangwe varipi munyika uye nekubvumidza vadzidzi vakaremara kuve nemarodhi anochinjika.
Fungidzira kuti inguva yakawanda sei yaizochengetera vadzidzi vakaremara kana vaigona kuita basa ravo rechikoro pamberi kana kuti pashure pebasa pasina kuenda kuchikoro.
Nemaromote ekupaka masisitimu, senge paytowriteessays.com, kunyangwe avo vane dexterity zvinonetsa vanogona kuita mabasa sekutsvaga online uye kunyora kumba.
Basa rekure kure rinogona kunge risina kuwanda senzvimbo dzanhasi dzekushanda pamwe chete, asi zvirokwazvo idanho rekuenda munzira kwayo. Zvinotora kufunga nezveavo vedu vasingakwanise kuuya mukirasi zuva rega rega uye vanobvumira vadzidzi ava kuti vashande pane mamwe emabasa akafanana nevezera ravo (kutsvagisa nekunyora pamhepo) uye/kana kutsvaga zvimwe zvavanofarira.
Basa rekure kure rinogona kunge risiri remunhu wese muna 2022, asi ichokwadi chinogona kuitika kune vadzidzi vakaremara vanoda kuita dzidzo yepasecondary. Chinhu chinogona kutitora kuti tive nzanga inosanganisirwa zvizere iyo inobatsira munhu wese zvisinei nekusiyana kwavo.
Tekinoroji ine simba rekushandura hupenyu hwedu nenzira idzo munhu anogona kungofungidzira, asi inewo mukana wekuvandudza hupenyu nenzira dzisingafungidzirwe. Basa rekure kure ndiyo imwe nzira iyo tekinoroji inogona kubatsira vadzidzi vakaremara, asi pane zvimwe zvingangoitika pakatarisana.